युएई हुनेलाई खुसीको खबर, सहजै जानुहोस युरोप ! (तलब र प्रक्रिया यस्तो छ) - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
युरोप कस्को सपना नहोला र ? युरोप अधिकाश नेपालीको सपनामै रहेको छ । यदि तपाईहामिलाई सजिलै युरोप जान सक्ने अवसर मिले के गर्छौ होला ?तपाईं हामी सबैको एउटै उत्तर हुन्छ होला , युरोप जान्छौं । तर धेरैलाई थाहा नहोला, युरोप जान युएई अझ बिशेषगरि दुबईबाट धेरै सहज छ ।